မိဘတွေ မရှိတော့တဲ့ သူမကို ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ မိသားစုက ချစ်ပေးလို့ ကြည်နူးပီတိဖြစ်နေတဲ့ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့် – Cele Posts
မင်းသမီးချောလေး ဇင်ဇင်ဇော်မြင့် ကတော့ တစ်ခေတ်တစ်ခါ ကတည်းက အနုပညာ လောကမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ပရိသတ် အချစ်တော် တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်က ဇာတ်ကားတွေ အများအပြားရိုက်ကူးပြီး အနုပညာ အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုချိန်မှာတော့ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်က ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးကို အာရုံစိုက်ပြီး ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်ကိုင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အိမ်ထောင်ကျ ကံကောင်းခဲ့တဲ့ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်က သာယာချမ်းမြေ့တဲ့ မိသားစုဘဝလေးတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အခုလည်း ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်က “မိသားစု..မိသားစုဆိုတဲ့စကားလေးက အရမ်း မေလေးအတွက် တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးလွန်းရပါတယ် .အောင်မြင်ချိန်ပျော်ရွှင်ချိန် တင်မကပဲ ကျဆုံးချိန် အဆင်မပြေချိန်ဖိအားများချိန်တွေမှာ မေတ္တာတွေပေးပြီး အေးအတူပူအမျှရင်ဆိုင်ပြီး အားပေးပြီး အတူရင်ဆိုင်ကာ အမြဲအားပေးပြီး အတူ အနစ်နာခံရှိပေးတာ မိသားစုပါ (၂၀၁၄)ကတည်းက မေလေးရဲ့သက်ရှိ ဘုရားအမေနဲ့အဖေ ရှေ့နောက်ဆုံးသွားချိန်ကရော အဲ့အချိန်မတိုင်ခင်ကတည်းကရော အမြဲမိသားစုလို အဖေအရင်းလို မေတ္တာတွေပေးပြီး စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာ ကိုချမ်းဖေဖေနဲ့အမ့ပါ ဖေဖေက မေလေးအတွက်ဘုရားပေးတဲ့ ဆုလာဘ်ပါ .ဘယ်မိသားစုမဆို perfect ဆိုတာတော့ မရှိပါဘူး . မေလေး အတွက်တော့perfect ပါပဲ”
“မေလေး အတွက် ဒီမိသားစုလေးက ဘုရားပေးတဲ့ ဆုလာဘ်ပါ . ဒီနေ့မိသားစု ဖေဖေနဲ့အမ့တို့နဲ့ မေလေး တို့အတူ နေ့လည်စာစားပြီး ထိုင်ကန်တော့ ခဲ့ပါတယ် . မိသားစု အမှတ်တရ ပုံရိပ်လွှာလေး ဓာတ်ပုံတွေက စကားပြောလို့ အရမ်းတန်ဖိုး ထားပါတယ်ရှင် မေလေး ချစ်ရသူတွေ တစ်ယောက်ချင်းစီနဲ့ ထမင်းလုတ်တိုင်းရဲ့ကျေးဇူးရှင် တွေလည်း ကျန်းမာချမ်းသာ အနာရောဂါ ကင်းဝေး စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ပြီး လိုတိုင်းတရပြီး ကောင်းကျိုး လိုရာပြည့် သာသနာပြုနိုင်ပြီး နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း အထောက်အပံ့ ကုသိုလ်ထူးတွေပြုနိုင်ရကြပါစေလို့ သစ္စာပြုပါတယ် Love you All “ဆိုပြီး ရေးသားပြောပြ ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကဲ ချစ်ပရိသတ်တွေ အတွက် ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်တို့ မိသားစုရဲ့ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
မိဘတှေ မရှိတော့တဲ့ သူမကို ခငျပှနျးဖွဈသူရဲ့ မိသားစုက ခဈြပေးလို့ ကွညျနူးပီတိဖွဈနတေဲ့ ဇငျဇငျဇျောမွငျ့
မငျးသမီးခြောလေး ဇငျဇငျဇျောမွငျ့ ကတော့ တဈခတျေတဈခါ ကတညျးက အနုပညာ လောကမှာ အောငျမွငျကြျောကွားခဲ့တဲ့ ပရိသတျ အခဈြတျော တဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ဇငျဇငျဇျောမွငျ့က ဇာတျကားတှေ အမြားအပွားရိုကျကူးပွီး အနုပညာ အလုပျတှကေို လုပျကိုငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ အခုခြိနျမှာတော့ ဇငျဇငျဇျောမွငျ့က ကိုယျပိုငျ စီးပှားရေးကို အာရုံစိုကျပွီး ကွိုးစားပမျးစား လုပျကိုငျနတော ဖွဈပါတယျ ။ အိမျထောငျကြ ကံကောငျးခဲ့တဲ့ ဇငျဇငျဇျောမွငျ့က သာယာခမျြးမွတေဲ့ မိသားစုဘဝလေးတဈခုကို ပိုငျဆိုငျခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ ။
အခုလညျး ဇငျဇငျဇျောမွငျ့က “မိသားစု..မိသားစုဆိုတဲ့စကားလေးက အရမျး မလေေးအတှကျ တနျဖိုးထားမွတျနိုးလှနျးရပါတယျ .အောငျမွငျခြိနျပြျောရှငျခြိနျ တငျမကပဲ ကဆြုံးခြိနျ အဆငျမပွခြေိနျဖိအားမြားခြိနျတှမှော မတ်ေတာတှပေေးပွီး အေးအတူပူအမြှရငျဆိုငျပွီး အားပေးပွီး အတူရငျဆိုငျကာ အမွဲအားပေးပွီး အတူ အနဈနာခံရှိပေးတာ မိသားစုပါ (၂၀၁၄)ကတညျးက မလေေးရဲ့သကျရှိ ဘုရားအမနေဲ့အဖေ ရှနေ့ောကျဆုံးသှားခြိနျကရော အဲ့အခြိနျမတိုငျခငျကတညျးကရော အမွဲမိသားစုလို အဖအေရငျးလို မတ်ေတာတှပေေးပွီး စောငျ့ရှောကျပေးခဲ့တာ ကိုခမျြးဖဖေနေဲ့အမ့ပါ ဖဖေကေ မလေေးအတှကျဘုရားပေးတဲ့ ဆုလာဘျပါ .ဘယျမိသားစုမဆို perfect ဆိုတာတော့ မရှိပါဘူး . မလေေး အတှကျတော့perfect ပါပဲ”
“မလေေး အတှကျ ဒီမိသားစုလေးက ဘုရားပေးတဲ့ ဆုလာဘျပါ . ဒီနမေိ့သားစု ဖဖေနေဲ့အမ့တို့နဲ့ မလေေး တို့အတူ နလေ့ညျစာစားပွီး ထိုငျကနျတော့ ခဲ့ပါတယျ . မိသားစု အမှတျတရ ပုံရိပျလှာလေး ဓာတျပုံတှကေ စကားပွောလို့ အရမျးတနျဖိုး ထားပါတယျရှငျ မလေေး ခဈြရသူတှေ တဈယောကျခငျြးစီနဲ့ ထမငျးလုတျတိုငျးရဲ့ကြေးဇူးရှငျ တှလေညျး ကနျြးမာခမျြးသာ အနာရောဂါ ကငျးဝေး စိတျခမျြးသာပြျောရှငျပွီး လိုတိုငျးတရပွီး ကောငျးကြိုး လိုရာပွညျ့ သာသနာပွုနိုငျပွီး နိဗ်ဗာနျရောကျကွောငျး အထောကျအပံ့ ကုသိုလျထူးတှပွေုနိုငျရကွပါစလေို့ သစ်စာပွုပါတယျ Love you All “ဆိုပွီး ရေးသားပွောပွ ထားတာ ဖွဈပါတယျ ။ ကဲ ခဈြပရိသတျတှေ အတှကျ ဇငျဇငျဇျောမွငျ့တို့ မိသားစုရဲ့ပွနျလညျ မြှဝပေေး လိုကျပါတယျနျော။
ချယ်ရီဦး နာရီကြော်ငြာလေးကို အတူတူ ရိုက်ကူးတော့မယ့် ဟန်နေတာနဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး